Yesu Agyede No—“Adekyɛde a Ɛyɛ Pɛ” a Efi Agya no Nkyɛn | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Digor Douala Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Hungarian Sign Language Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mongolian Moore Motu Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Bolivia) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
“Akyɛde pa ne adekyɛde a ɛyɛ pɛ biara fi . . . Agya no nkyɛn.”—YAK. 1:17.
NNWOM: 148, 109
DWUMA BƐN NA AGYEDE NO DI . . .
ma Yehowa din ho tew?
wɔ Onyankopɔn Ahenni nniso no ase?
ma Onyankopɔn atirimpɔw ba mu?
1. Nhyira bɛn na agyede no a wɔde mae no betumi ama yɛanya?
YESU KRISTO agyede afɔre no ma yetumi nya nhyira bebree. Agyede afɔre no a wɔde mae no abue kwan ama Adam mma a wɔdɔ trenee nyinaa sɛ daakye wobetumi abɛyɛ Onyankopɔn abusua no mufo. Afei nso, agyede no betumi ama yɛatena ase daa wɔ anigye mu. Nanso, ɛnyɛ dwuma a Kristo agyede no di ara ne sɛ ɛbɛma adesamma asoɔmmerɛwfo anya daakye a anigye wom kɛkɛ. Yehowa trenee a Yesu kuraa mu pintinn na ofii ne pɛ mu wui no siesiee asɛm bi a ɛho hia a ɛfa ɔsorofo ne asase sofo nyinaa ho.—Heb. 1:8, 9.
2. (a) Nsɛm a ɛho hia a ɛfa ɔsorofo ne asase sofo nyinaa ho bɛn na ɛwɔ Yesu mpaebɔ no mu? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.) (b) Dɛn na yebesusuw ho wɔ adesua yi mu?
2 Aka bɛyɛ mfe mmienu ama Yesu awu na ɔde ne nkwa ama sɛ agyede afɔre no, ɔkyerɛɛ n’asuafo no sɛ wɔmmɔ mpae sɛ: “Yɛn Agya a wowɔ soro, wo din ho ntew. W’ahenni mmra. W’apɛde nyɛ hɔ wɔ asase so te sɛ ɔsoro.” (Mat. 6:9, 10) Momma yensusuw sɛnea agyede no bɛma Onyankopɔn din ho atew, sɛnea ɛfa Onyankopɔn Ahenni nniso no ho, ne sɛnea ɛbɛma Onyankopɔn atirimpɔw abam no ho. Sɛ yɛyɛ saa a, ɛbɛma anisɔ a yɛwɔ ma agyede no ayɛ kɛse paa.
3. Dɛn na Yehowa din no ma yehu fa ne ho? Dɛn na Satan yɛe de guu saa din kronkron no ho fĩ?
3 Mpae a Yesu kyerɛɛ n’asuafo no mu no, adesrɛ a ɔde dii kan ne sɛ Onyankopɔn din ho ntew. Yehowa din no ma yehu onii kõ a ɔyɛ. Ɛma yehu sɛ Yehowa ne Otumfoɔ pumpuni no, ɔyɛ onuonyamfo, na ne kronkronyɛ nni ano. Bere foforo bi a Yesu bɔɔ mpae no, ɔfrɛɛ Yehowa sɛ “Agya Kronkron.” (Yoh. 17:11) Esiane sɛ Yehowa yɛ kronkron nti, ne gyinapɛn ne ne mmara nyinaa nso yɛ kronkron. Nanso wei nyinaa akyi no, Satan nam anifere kwan so kae wɔ Eden turom sɛ Onyankopɔn nni hokwan sɛ ɔma nnipa gyinapɛn a ɛsɛ sɛ wɔhwɛ so bɔ wɔn bra. Satan twaa atoro too Yehowa so de guu Onyankopɔn din kronkron no ho fĩ.—Gen. 3:1-5.
4. Dɛn na Yesu yɛe de tew Onyankopɔn din ho?
4 Yesu de, na Yehowa din no da ne koma so paa. (Yoh. 17:25, 26) Yesu tew Onyankopɔn din no ho. (Kenkan Dwom 40:8-10.) Bere a Yesu wɔ asase so no, ɔbɔɔ ne bra yiye paa. Ɔkwan a Yesu faa so bɔɔ ne bra no ma ɛdaa adi sɛ ɛfata na ɛteɛ sɛ Yehowa bɛma abɔfo ne nnipa gyinapɛn a wɔde bɛbɔ wɔn bra. Ɛwom sɛ Satan ma wokum Yesu yayaayaw de, nanso Yesu dii ne soro Agya no nokware kosii ase. Nokware a Yesu dii no ma ɛdaa adi sɛ, onipa a ɔyɛ pɛ betumi ayɛ osetie ama Onyankopɔn na ɔde Onyankopɔn gyinapɛn a ɛteɛ no abɔ ne bra bere nyinaa.
5. Yɛbɛyɛ dɛn aboa ama Onyankopɔn din ho atew?
5 Dɛn na yɛbɛyɛ de akyerɛ sɛ Yehowa din no da yɛn koma so? Yɛde yɛn abrabɔ na ɛbɛkyerɛ. Yehowa hwɛ kwan sɛ yɛbɛyɛ kronkron. (Kenkan 1 Petro 1:15, 16.) Wei kyerɛ sɛ, ɛsɛ sɛ yɛsom Yehowa nkutoo na yefi yɛn koma nyinaa mu yɛ osetie ma no. Sɛ wɔde ɔtaa ba yɛn so mpo a, yɛyɛ nea yebetumi biara sɛ yɛde Yehowa nnyinasosɛm ne ne mmara a ɛteɛ no bɛbɔ yɛn bra. Sɛ yɛyɛ adetrenee a, ɛma yɛn kanea hyerɛn, na ɛhyɛ Yehowa din anuonyam. (Mat. 5:14-16) Yɛbɔ yɛn bra sɛ nnipa a wɔyɛ kronkron, na ɛma obiara hu sɛ Yehowa mmara yɛ papa. Ɛsan ma ɛda adi sɛ, sobo a Satan bɔɔ Yehowa no yɛ atoro. Esiane sɛ bɔne wɔ yɛn ho nti, yɛn nyinaa di mfomso. Sɛ ɛba saa a, yefi yɛn komam nu yɛn ho, na yɛtwe yɛn ho fi biribiara a egu Yehowa din ho fĩ no ho.—Dw. 79:9.
6. Ɛwom sɛ yɛtɔ sin, nanso Yehowa tumi bu yɛn treneefo. Adɛn ntia?
6 Yehowa de wɔn a wonya Kristo afɔre no mu gyidi no bɔne kyɛ wɔn. Wɔn a wohyira wɔn ho so ma Yehowa no, ogye wɔn tom sɛ n’asomfo. Yehowa bu Kristofo a wɔasra wɔn no bem sɛ ne mma, na Kristofo a wɔka “nguan foforo” no ho no, obu wɔn bem sɛ ne nnamfo. (Yoh. 10:16; Rom. 5:1, 2; Yak. 2:21-25) Enti ɛnnɛ mpo, agyede no ma yɛn Agya Yehowa tumi bu yɛn treneefo, na ɛma yetumi tew ne din ho.
7. Nhyira bɛn na agyede no bɛma yɛanya wɔ Ahenni nniso no ase?
7 Adesrɛ a edi hɔ a Yesu de too Onyankopɔn anim wɔ mpaebɔ a ɔkyerɛɛ n’asuafo no mu ne sɛ: “W’ahenni mmra.” Agyede no fa Onyankopɔn Ahenni no ho sɛn? Agyede no abue kwan ama wɔapaw nnipa 144,000 sɛ wɔne Kristo nkodi ade sɛ ahene na wɔnsom sɛ asɔfo wɔ soro. (Adi. 5:9, 10; 14:1) Yesu ne ne mfɛfo adedifo no na wɔbom yɛ Onyankopɔn Ahenni no. Wɔbɛma adesamma asoɔmmerɛwfo anya agyede no so mfaso mfirihyia apem. Asase bɛdan paradise. Nnipa anokwafo nyinaa bɛyɛ pɛ a sintɔ biara nni wɔn ho, na afei Onyankopɔn abusua no fã a ɛwɔ soro ne nea ɛwɔ asase so no nyinaa bɛbom ayɛ baako. (Adi. 5:13; 20:6) Yesu bɛpɛtɛw ɔwɔ no ti na wayi ɔhaw a Satan atuatew no de aba amansan yi mu nyinaa afi hɔ korakora.—Gen. 3:15.
8. (a) Dɛn na Yesu yɛe de boaa n’asuafo no ma wohui sɛ Onyankopɔn Ahenni no ho hia? (b) Ɛnnɛ, dɛn na yɛbɛyɛ de akyerɛ sɛ yɛtaa Ahenni no akyi?
8 Bere a Yesu wɔ asase so no, ɔboaa n’asuafo no ma wohui sɛ Onyankopɔn Ahenni no ho hia. Yesu asubɔ akyi pɛɛ na ofii ase kaa “Onyankopɔn ahenni ho asɛmpa” no wɔ mmeae pii. (Luka 4:43) Asɛm a etwa to a Yesu ka kyerɛɛ n’asuafo ansa na ɔrekɔ soro ne sɛ, wɔnyɛ n’adansefo nkɔpem “asase ano nohoa.” (Aso. 1:6-8) Ahenni ho asɛmpaka adwuma no na na ɛbɛma asase so nnipa nyinaa anya hokwan asua agyede no ho ade na wɔabɛyɛ Onyankopɔn Ahenni no manfo. Ɛnnɛ, nea yɛyɛ de kyerɛ sɛ yɛtaa Ahenni no akyi ne sɛ yɛbɛboa Kristo nuanom a wɔwɔ asase so no ama wɔadi ahyɛde a wɔde ama wɔn sɛ wɔnka Ahenni ho asɛmpa no wɔ wiase nyinaa no so.—Mat. 24:14; 25:40.
“W’APƐDE NYƐ HƆ”
9. Adɛn nti na yebetumi anya ahotoso sɛ Yehowa bɛma nea wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ ama adesamma no abam?
9 Asɛm a edi hɔ a Yesu kae wɔ mpae a ɔkyerɛɛ n’asuafo no mu ne sɛ: “W’apɛde nyɛ hɔ.” Dɛn na na Yesu rekyerɛ? Esiane sɛ Yehowa ne Ɔbɔadeɛ no nti, sɛ ɔka sɛ biribi nyɛ hɔ a, ɔkwan biara so ɛbɛyɛ hɔ. (Yes. 55:11) Yehowa remma Satan atuatew no nsɛe nea wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ ama adesamma no. Efi mfiase no, na Yehowa apɛde ne sɛ Adam ne Hawa mma a wɔyɛ pɛ bɛhyɛ asase so mã. (Gen. 1:28) Sɛ Adam ne Hawa anwo ansa na wɔrewu a, anka Onyankopɔn atirimpɔw a ɛne sɛ Adam ne Hawa asefo bɛhyɛ asase so mã no remma mu. Enti bere a Adam ne Hawa yɛɛ bɔne akyi no, Yehowa maa kwan ma wɔwoo mma. Onyankopɔn nam agyede no so abue kwan ama wɔn a wonya agyede no mu gyidi nyinaa sɛ wobetumi abɛyɛ pɛ a sintɔ biara nni wɔn ho, na wɔatena ase daa. Yehowa dɔ nnipa, na ne pɛ ne sɛ nnipa asoɔmmerɛwfo benya asetena pa a na ɔpɛ sɛ wonya no.
10. Ɛbɛyɛ dɛn na nnipa a wɔawuwu anya agyede no so mfaso?
10 Nnipa ɔpepepem pii a wɔannya hokwan ansua Yehowa ho ade na wɔansom no ansa na wɔrewu no nso ɛ? Agyede no abue owusɔre ho kwan. Yɛn soro Agya a ɔdɔ yɛn no benyan awufo aba nkwa mu bio na wama wɔanya hokwan asua n’atirimpɔw ho ade na wɔanya hokwan atena ase daa. (Aso. 24:15) Yehowa mpɛ sɛ nnipa wu, na mmom ɔpɛ sɛ wonya nkwa. Yehowa ne nkwa Nsuti no, enti Yehowa bɛyɛ obiara a obenyan no aba nkwa mu no Agya. (Dw. 36:9) Wei nti, ɛfata paa sɛ Yesu kyerɛɛ yɛn sɛ, sɛ yɛrebɔ mpae a yɛnka sɛ: “Yɛn Agya a wowɔ soro.” (Mat. 6:9) Yehowa ama Yesu adwuma titiriw wɔ awufo a wobenyan wɔn no mu. (Yoh. 6:40, 44) Yesu ne “owusɔre ne nkwa,” na ɔbɛyɛ saa adwuma no wɔ Paradise.—Yoh. 11:25.
11. Dɛn ne Onyankopɔn apɛde ma “nnipakuw kɛse” no?
11 Yesu kae sɛ: “Obiara a ɔyɛ nea Onyankopɔn pɛ no, ɔno ne me nuabarima ne me nuabea ne me maame.” Ɛno ma yehu sɛ ɛnyɛ nnipa kakraa bi a wɔyɛ atitiriw pɛ na Yehowa bɛda ayamye adi akyerɛ wɔn. (Mar. 3:35) Onyankopɔn apɛde ne sɛ “nnipakuw kɛse” a wɔn dodow nni ano a wofi amanaman ne mmusuakuw ne kasa nyinaa mu bɛba abɛyɛ n’asomfo. Wɔn a wonya Kristo agyede no mu gyidi na wɔyɛ Onyankopɔn apɛde no betumi aka wɔn a wɔteɛm yi ho. Wɔteɛm sɛ: “Yɛn nkwagye fi yɛn Nyankopɔn a ɔte ahengua no so ne Oguammaa no hɔ.”—Adi. 7:9, 10.
12. Dɛn na ɛwɔ mpae a Yesu kyerɛɛ n’asuafo no mu a ɛma yehu atirimpɔw a Yehowa wɔ ma adesamma asoɔmmerɛwfo no?
12 Sɛ yɛhwɛ adesrɛ a ɛwɔ mpae a Yesu kyerɛɛ n’asuafo no mu a, ɛma yehu atirimpɔw a Yehowa wɔ ma adesamma a wɔyɛ osetie. Yɛpɛ sɛ yɛde mpae no mu nsɛm yɛ adwuma, na yɛyɛ nea yebetumi biara sɛ yɛbɛtew Yehowa din ho, anaasɛ yebebu ne din sɛ ɛyɛ kronkron. (Yes. 8:13) Yesu din no nkyerɛase ne “Yehowa Ne Nkwagye,” na nkwagye a agyede no ma yenya no de nidi ne anuonyam brɛ Yehowa din. Onyankopɔn Ahenni no de agyede no so mfaso bedi dwuma de aboa adesamma asoɔmmerɛwfo. Nokwasɛm ne sɛ, mpae a Yesu kyerɛɛ n’asuafo no ma yenya awerɛhyem sɛ, biribiara nni hɔ a ebetumi asiw Onyankopɔn apɛde kwan.—Dw. 135:6; Yes. 46:9, 10.
KYERƐ AGYEDE NO HO ANISƆ
13. Sɛ yɛbɔ asu a, ɛkyerɛ sɛn?
13 Ɔkwan titiriw bi wɔ hɔ a yebetumi afa so akyerɛ sɛ yɛn ani sɔ agyede no. Ɛne sɛ yebegyina agyede no mu gyidi a yɛanya so ahyira yɛn ho so ama Yehowa na yɛabɔ asu. Sɛ yɛbɔ asu a, ɛma ɛda adi sɛ “yɛyɛ Yehowa dea.” (Rom. 14:8) Asubɔ yɛ adesrɛ a yɛde to Onyankopɔn anim de pɛ ahonim pa. (1 Pet. 3:21) Yehowa tie saa abisade no, na ɔde Kristo afɔre a etumi hohoro bɔne no yɛ yɛn ho adwuma. Yegye di paa sɛ nea Yehowa ahyɛ ho bɔ nyinaa, ɔbɛyɛ ama yɛn.—Rom. 8:32.
Dɛn na yɛbɛyɛ de akyerɛ sɛ yɛn ani sɔ agyede no? (Hwɛ nkyekyɛm 13, 14)
14. Adɛn nti na Yehowa ama yɛn ahyɛde sɛ yɛnnɔ yɛn yɔnko?
14 Dɛn bio na yɛbɛyɛ de akyerɛ sɛ yɛn ani sɔ agyede no? Biribiara a Yehowa yɛ no, ɔdɔ na ɛka no ma ɔyɛ. Enti ɔpɛ sɛ n’asomfo nyinaa da ɔdɔ adi wɔ biribiara a wɔyɛ mu. (1 Yoh. 4:8-11) Sɛ yɛdɔ yɛn yɔnko a, ɛkyerɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ “[yɛn] Agya a ɔwɔ soro no mma.” (Mat. 5:43-48) Ahyɛde a ɛne sɛ yɛnnɔ Yehowa no ne ahyɛde a ɛsen biara, na nea edi hɔ ne nea ɛka sɛ yɛnnɔ yɛn yɔnko sɛ yɛn ho no. (Mat. 22:37-40) Ade titiriw baako a yɛyɛ de kyerɛ sɛ yɛdɔ yɛn yɔnko ne sɛ yebetie ahyɛde a ɛne sɛ yɛnka Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa no. Sɛ yɛdɔ yɛn yɔnko nnipa a, na yɛreda Onyankopɔn anuonyam adi. Nokwasɛm ne sɛ, sɛ yetie ahyɛde a ɛne sɛ yɛnnɔ afoforo, titiriw yɛn nuanom no a, na ɔdɔ a yɛwɔ ma Onyankopɔn no ‘awie pɛyɛ wɔ yɛn mu.’—1 Yoh. 4:12, 20.
AGYEDE NO MA YENYA “AHOSAN MMERE” FI YEHOWA NKYƐN
15. (a) Nhyira bɛn na yenya fi Yehowa hɔ nnɛ? (b) Nhyira bɛn na ɛda hɔ retwɛn yɛn?
15 Sɛ yenya agyede no mu gyidi a, ɛma Yehowa tumi de yɛn bɔne kyɛ yɛn koraa. Onyankopɔn Asɛm no ma yɛn awerɛhyem sɛ wobetumi ‘apopa yɛn bɔne.’ (Kenkan Asomafo Nnwuma 3:19-21.) Sɛnea yɛasusuw ho dedaw no, agyede no na Yehowa nam so gye n’asomfo a wɔde honhom asra wɔn no yɛ ne mma. (Rom. 8:15-17) Yɛn a yɛyɛ “nguan foforo” no de, ɛte sɛ nea Yehowa ahyehyɛ tumi krataa bi ato hɔ wɔ yɛn din mu. Saa krataa no bɛma watumi agye yɛn ayɛ ne mma. Bere a yɛabɛyɛ pɛ a sintɔ biara nni yɛn ho, na yɛadi nkonim wɔ sɔhwɛ a etwa no mu no, sɛ yɛbɛka a, Yehowa ani begye sɛ ɔde ne nsa bɛhyɛ saa tumi krataa no ase de agye yɛn ayɛ ne mma a ɔdɔ wɔn wɔ asase so. (Rom. 8:20, 21; Adi. 20:7-9) Ɔdɔ a Yehowa wɔ ma ne mma a wɔsom bo no to rentwa da. Mfaso a agyede no de bɛba no bɛtena hɔ daa. (Heb. 9:12) Akyɛde yi som bo paa, na ɛbɛkɔ so asom bo daa. Onipa anaa tumi biara nni hɔ a ebetumi agye saa akyɛde no afi yɛn nsam.
16. Ɔkwan bɛn so na agyede no ma yenya ahofadi koraa?
16 Wɔn a wofi wɔn komam nu wɔn ho wɔ wɔn bɔne ho no bɛba abɛyɛ Yehowa abusua no mufo daakye. Biribiara nni hɔ a Ɔbonsam betumi ayɛ de asiw wɔn kwan. Yesu baa asase so bewui “prɛko.” Enti Yehowa atua agyede no korakora. (Heb. 9:24-26) Owu afobu a Adam de baa adesamma so no, agyede no ayi afi hɔ koraa. Kristo afɔre no nti, yɛanya ahofadi afi Satan wiase yi nkoasom mu, na owu ho hu biara nhyɛ yɛn so bio.—Heb. 2:14, 15.
17. Ɔdɔ a Yehowa wɔ ma yɛn no ma wote nka sɛn?
17 Onyankopɔn bɔhyɛ nyinaa bɛbam ɔkwan biara so. Sɛnea abɔde mu mmara a Yehowa ahyehyɛ nni yɛn huammɔ da no, saa ara na Yehowa nso renni yɛn huammɔ da. Yehowa nsakra. (Mal. 3:6) Ɛnyɛ nkwa nko na Yehowa de akyɛ yɛn, na mmom wama yɛn nneɛma pii a ɛsen saa. Wada ne dɔ adi akyerɛ yɛn. Bible ka sɛ: “Yɛn ankasa abehu, na yɛagye ɔdɔ a Onyankopɔn wɔ ma yɛn no adi. Onyankopɔn ne dɔ.” (1 Yoh. 4:16) Asase nyinaa bɛdan paradise fɛfɛɛfɛ, na wɔn a wɔwɔ asase so besuasua Onyankopɔn na wɔadodɔ wɔn ho. Ɛmmra sɛ yɛne Onyankopɔn asomfo anokwafo a wɔwɔ soro no bɛbom aka sɛ: “Nhyira ne anuonyam ne nyansa ne aseda ne nidi ne tumi ne ahoɔden nka yɛn Nyankopɔn daa daa. Amen.”—Adi. 7:12.